बच्चाको दिमाग तेज होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? यी खानेकुरा खुवाउनुहोस् – Naya Pusta
बच्चाको दिमाग तेज होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? यी खानेकुरा खुवाउनुहोस्
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७७ असार १७, बुधबार १५:४१ [post-views]
बच्चाको शारीरीक र मानसिक विकास उसको खानपानमा निर्भर हुन्छ । बच्चाको आहारमा आवश्यक पौष्टिक तत्व छ भने मानसिक विकास पनि तीब्र रुपमा हुन्छ।
बालबालिकाको मष्तिष्कको विकासका बारेमा गरिएको एक अध्ययनमा आमाको खानपानको असर बच्चाको दिमागमा पर्ने तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । यदि आमाले गर्भावस्थामा ओमेगा ३ फ्याटी एसिडयुक्त खाना बढी सेवन गर्छिन् भने बच्चाको दिमाग तेज हुन्छ।
बच्चाको दिमागको विकासका लागि हरियो सागसब्जी खुवाउनुपर्छ । बच्चालाई ६ महिनापछि ठोस आहार दिइन्छ। त्यसपछि उसलाई खानामा पालुंगो, बन्दा जस्ता पदार्थ दिन सकिन्छ । यिनमा ओमेगा ३ फ्याटी एसिड पाइन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : जानीराखौँ कुन ब्लडग्रुप भएकाले के खानु उपयुक्त
बच्चाको दिमागी विकासका लागि दूध र दही दिन सकिन्छ । दहीले दिमागको कोषलाई लचिलो बनाउँछ र यसले संकेत लिने र त्यसमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने क्षमता बढ्छ । चिल्लोरहित दूध प्रोटिन, भिटामिन डी र फस्फोरसको भण्डार हो जो दिमागका लागि जरुरी हुन्छ ।
घरमा यी चीज राख्नुहोस्, चम्किने छ तपाईको भाग्य